Gbasara Anyị - Xuzhou Easypack Glassware Limited Company
Xuzhou Easypack Glassware Limited Company bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ jikọtara ọnụ na ngwaahịa ngwaahịa. Dị ka a emeputa nke e hiwere na 2012 na Xuzhou obodo, Jiangsu Province, anyị nwere ọkaibe ahụmahụ na-amị iko containers. Anyị factory merela agadi mmepụta akụrụngwa, ihe karịrị 30 agadi injinia na gburugburu 300 ọrụ. Anyị na-emepụta a dịgasị iche iche nke iko containers, dị ka boston gburugburu karama, ịchọ mma karama, onunu karama, iko kitchenware, pharmaceutic karama, iko mason ite, iko nri nchekwa ite na yiri ngwa.
Anyị nwere ahịrị akpaka ise yana ahịrị nke akpaka iji mepụta iko dị iche iche n'ụdị dị iche iche, ihe karịrị ụdị puku ebuka 4,000 bụ maka nhọrọ gị. Anyị na-enye OEM na ODM ọrụ dị ka ndị ahịa chọrọ.
Ka ọ dị ugbu a, anyị na-enye ndị ahịa ọrụ nhazi miri emi maka ngwaahịa ha, dị ka mbipụta silk, eserese agba, frosting, stampụ ọkụ, decal na embossing. Iji bụrụ ndị a maara nke ọma ụlọ ọrụ na glassware technology ubi, anyị na-enye elu-edu ngwaahịa na onye-nkwụsị ọrụ maka ndị ahịa si n'ụwa nile. Around 90% nke anyị na ngwaahịa na-exported na United States, Canada, na United Kingdom, Germany, Russian, South Korea, Malaysia, Thailand, India, Australia, na mba ndị ọzọ. Site na icheiche dị elu na aha a pụrụ ịdabere na ya, anyị kwenyesiri ike na Easypack ga-eweta ọbụbụenyi na-adịte aka yana imekọ ihe ọnụ na ndị enyi niile na ndị mmekọ azụmahịa maka mmepe mmekọrịta. Họrọ Easypack ga-abụ ụzọ gị dị mfe iji nwee ọganiihu!
Ka COMI AROMA na-eto, anyị na-agbasi mbọ ike imeju ihe ndị ahịa chọrọ.
A Jole njem na-atọ ụtọ, Ọrụ obi ụtọ na COMI AROMA!
Biko kpọtụrụ anyị na ajụjụ ọ bụla.
Glass Ude mmiri iko na mgbapụta, Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Clear Glass mgbapụta karama, Glass kalama na mgbapụta Dispenser, Iko karama na ịgba nfuli, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu,